Hay’adda IOM oo agab looga hortagayo Covid-19 ku wareejisay Wasaaradda Caafimaadka Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Hay’adda IOM oo agab looga hortagayo Covid-19 ku wareejisay Wasaaradda Caafimaadka Somaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Mashiinadaan neef Caawiyayaasha ah oo gaaraya 20 xabo ayaa hay’adda Caalamiga ah ee socdaalka dunid IOM waxaa ay ku wareejisay Isbitaalka Martiini oo ah goobta lagula tacaalayo xaaladaha bukaanada qaba cudurka Covid19, waxaana ay ka caawin doono badbaadinta bukaanada uu soo rito xanuunkaan gaar ahaana kuwa neef qabatooma.
Ku-xigeenka Madaxa Howlgalka Hey’adda IOM Soomaaliya ahna Ku simaha madaxa ayaa sheegtay in mashiinadaan ay uga qeyb qaadanayaan caawinta hanaanka dowladda Soomaaliya ay ku dooneyso in ay ku xakameyso Cudurkaan.
Agaasimaha Isbitaalka Martiini, Dr Cabdirisaaq Yuusuf Axmed Jalaalu’diin ayaa sheegay in mashiinadaan ay wax badan ka badali doonaan baahiyaha isbitaalka uu u qabay mashiinadaan hada xaalada isbitaalka ay wax badan ay iska badashay.
“Agabkaan waxa uu waxbadan ka bedli doonaa howsha adage ee inoo taalla ee ah la dagaalanka iyo xakameynta cudurka safmarka ah ee Covid-19 ee guud ahaan dalka oo dhan”, ayuu yiri Dr Jalaalu’diin.
Wasiir ku xigeenka cafimaadka ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay in muwaadinka Soomaaliyeed uu helo cafimaad tayo leh.
“Dowladda Soomaaliyeed waa ay ka go’antahay in muwaadiniinta ay helaan adeegyo caafimaad oo tayo leh waxaana ay xooga saartay sidii guud ahaan loogu gurman lahaa dadka uu haleelay cudurka Covid-19 iyadoo gaareysa deegaana ,Tuulo,Degmo iyo Gobolkaba dalka oo dhan”ayuu ku daray wasiir Maxamed Saciid Cabdullaahi.
Isbitaalka Martiini waxaa uu kaalin mug leh ka qaatay badbaadinta Shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka uu soo ritay xanuunka covid-19 waxaa lagu daweeyay ilaa 400 oo ruuc kuwaa oo xanunkaasi uu ku dhacay isla markaana dib ugu laabtay bulshadii ay la noolaayeen.
Hay'adda socdaalka dunida IOM